Saamayn intee la eg baa ka dhalata in dal uu magaciisa badalo? - BBC News Somali
Saamayn intee la eg baa ka dhalata in dal uu magaciisa badalo?
In dal magaca laga badalo uma saamayn badna sida marka uu dal xornimada helo ee magaca badalanayo, arrintaas oo go'aanqaadashadeedu ay la socoto calan iyo xadka qaranka.
Dalkan ayaa looga baahan yahay in uu magaca cusub ka diiwaan galiyo hay'adaha iyo ururrada caalamiga ah sida Qaramada Midoobay iyo ururka Barwaaqo Sooranka oo uu xubin ka yahay.
Toddobo arrimood ka ogow dalalka Barwaaqo Sooranka